Alaka Ụlọ Ọrụ Dị́ ná Nnukwu Ụlọ Elu | Otú Ihe Si Kwụrụ n’Indoneshia Ugbu A
Ọfis anyị dị n’okpukpu nke iri atọ na otu
N’afọ 2008, ndị nkwusa e nwere n’Indoneshia ruru puku iri abụọ na otu na narị isii na iri itoolu na itoolu. Alaka ụlọ ọrụ anyị anaghịzi aba mmadụ. Ọ nọghịkwa n’ebe mepere emepe n’ihi na a rụrụ ya mgbe ahụ a machibidoro anyị iwu. N’eziokwu, e kwesịrị inwe alaka ụlọ ọrụ ọhụrụ ka nke ahụ n’ebe dị nso na Jakata.
Mgbe ihe dị ka afọ abụọ gachara, ụmụnna anyị zụrụ ebe ka alaka ụlọ ọrụ ha nwere enwe mma. Ha zụrụ okpukpu nke iri atọ na otu nke ụlọ elu ọgbara ọhụrụ dị okpukpu iri anọ na abụọ. Ụlọ elu ahụ dị nso n’ebe etiti Jakata. Ụmụnna anyị zụkwara okpukpu nke mbụ ruo na nke iri na abụọ n’ụlọ elu dị nso, bụ́ ebe mmadụ iri asatọ ma ọ bụ karịa na-eje ozi na Betel ga-ebi. Ha zụkwara ụlọ elu dị okpukpu ise ebe ngalaba ụfọdụ ga-adị.
Ndị na-eje ozi na Betel bi n’okpukpu nke mbụ ruo na nke iri na abụọ
Ụmụnna ndị si mba ọzọ bịa ịrụ ọrụ na ndị ọrụ ngo e nyefere ọrụ ahụ gbakọtara aka rụzigharịa ụlọ ahụ. Nwanna Darren Berg, bụ́ onye na-elekọta ọrụ ahụ kwuru, sị, “Jehova nyeere anyị aka ugboro ugboro n’oge ndị anyị nwere nsogbu tara ezigbo akpụ. Dị ka ihe atụ, anyị chọrọ ịrụnye ígwè ọgbara ọhụrụ na-aza mmiri na-adịghị mma, ma ndị isi jụrụ inye anyị ikike ịrụ ya n’ihi na ha amaghị ihe ọ bụ. Mgbe ahụ, otu nwanna bụ́ njinia ji okwu a gakwuru onye ọrụ gọọmenti ọnụ na-eru n’okwu. Onye ọrụ gọọmenti ahụ kwadoro ozugbo ka anyị rụọ ya. O kwuru na obi siri ya ike na ihe ụmụnna anyị chọrọ ime dị mma.”
“Anyị anaghịzi ezo ezo. Ndị mmadụ ma Ndịàmà Jehova ama ugbu a. O doola ha anya na anyị enweghị ọlịla n’obodo a”
E nyefere Jehova alaka ụlọ ọrụ ọhụrụ a n’abalị iri na anọ n’ọnwa Febụwarị, afọ 2015. Ọ bụ Nwanna Anthony Morris III, bụ́ onye so n’Òtù Na-achị Isi, kwuru okwu e ji nyefee ya Jehova. Nwanna Vincent Witanto Ipikkusuma, bụ́ onye so na Kọmitii Alaka kwuru, sị: “Ebe a alaka ụlọ ọrụ anyị dịzi bụ ebe ụlọ ọrụ ụfọdụ a ma ama n’Indoneshia dị. Anyị anaghịzi ezo ezo. Ndị mmadụ ma Ndịàmà Jehova ama ugbu a. O doola ha anya na anyị enweghị ọlịla n’obodo a.”
Ndị a bụ ndị so na Kọmitii Alaka. I si n’aka ekpe gụwa, ha bụ: Nwanna Budi Sentosa Lim, Nwanna Vincent Witanto Ipikkusuma, Nwanna Lothar Mihank, na Nwanna Hideyuki Motoi
“Ikwusa Ozi Ọma Ebe A Na-atọ Ụtọ”
N’afọ ole na ole gara aga, ọtụtụ Ndịàmà Jehova si n’ebe dị iche iche kwaga n’Indoneshia. Otu nwanna aha ya bụ Lothar Mihank kwuru, sị: “Ndị na-eje ozi n’ebe a chọkwuru ndị nkwusa na-enyere obodo ndị dị ka nke anyị aka. Ha na-eme ka ụmụnna ndị ha na ha nọ n’ọgbakọ mara nke a na-akọ ma jiri ofufe Chineke kpọrọ ihe. Ha na-enyekwara ha aka ịhụ ụmụnna anyị nọ n’ụwa niile n’anya.” Olee ihe mere ụmụnna anyị ndị a ji hapụ obodo ha gaa Indoneshia? Oleekwa otú ihe si dịrị ha? Lee ihe ụfọdụ n’ime ha kwuru.
Ndị Na-eje Ozi n’Ebe A Chọkwuru Ndị Nkwusa
1. Nwanna Nwaanyị Janine na di ya Dan Moore
2. Nwanna Nwaanyị Mandy na di ya Stuart Williams
3. Nwanna Nwaanyị Casey na di ya Jason Gibbs
4. Nwanna Nwaanyị Mari (ọ nọ n’aka nri n’ihu) na di ya Takahiro Akiyama (ọ nọ n’aka nri n’azụ)
Jason Gibbs na nwunye ya Casey bụ́ ndị si n’Amerịka kwuru, sị: “Anyị chọpụtara n’Akwụkwọ Mgbaafọ anyị na mmadụ ole onye nkwusa nọ n’Indoneshia ketara izi ozi ọma buru ezigbo ibu. Ha so ná ndị kacha nwee ndị ha ga-ezi ozi ọma n’ụwa. Mgbe ahụ, ụfọdụ ndị enyi anyị na-eje ozi n’ebe a chọkwuru ndị nkwusa gwara anyị na ọtụtụ ndị Indoneshia na-ege ntị n’ozi ọma. N’ihi ya, anyị kpọrọ alaka ụlọ ọrụ anyị dị n’Indoneshia n’ekwentị ka ha gwa anyị ebe anyị ga-aga na-ezi ozi ọma. Ha sịrị anyị gaa na Bali. A ka malitere inwe ọgbakọ na-eji asụsụ Bekee amụ ihe amalite. N’ihi ya, anyị kpebiri na anyị ga-aga nyere ha aka. Anyị bubu n’obi ịnọ otu afọ, ma anyị anọọla afọ atọ. Ọtụtụ ndị anyị ziri ozi ọma anụtụbeghị banyere Ndịàmà Jehova. Ozi ọma anyị na-ezi ebe a bara ezigbo uru.”
Stuart Williams na nwunye ya Mandy si Ọstrelia. Ha akatatụkwala ahụ́. Ha kwuru, sị: “Anyị chọrọ izi ndị agụụ eziokwu na-agụ ozi ọma. N’ihi ya, anyị kwagara n’Indoneshia. Anyị hụrụ ọtụtụ ụmụ akwụkwọ mahadum na-asụ Bekee n’obodo Malang, dị́ n’Ebe Ọwụwa Anyanwụ Java. Ha gekwara anyị ntị nke ọma. Ihe ndị dị na jw.org masịkwara ha. Ozi ọma anyị na-ekwusa ebe a na-atọgbu anyị atọgbu.”
Takahiro Akiyama na nwunye ya Mari bụ ndị ọsụ ụzọ na-eje ozi na Yogịakata, dị́ n’agwaetiti Java. Ha kwuru, sị: “Ahụ́ ruru anyị ala ebe a karịa ka o ruru anyị na Japan. Ndị obodo a nwere obiọma, ha na-akpakwa àgwà ka ndị a zụrụ azụ. Ọtụtụ n’ime ha, nke ka nke ndị na-eto eto, chọrọ ịmata banyere okpukpe ndị ọzọ. Otu ụbọchị anyị nọ na-enye ndị mmadụ akwụkwọ anyị n’ebe na-ekwo ekwo anyị dosara akwụkwọ na tebụl, anyị nyefere ndị mmadụ puku magazin abụọ na narị isii naanị n’ime awa ise.”
Dan Moore na nwunye ya Janine dị ihe dị ka afọ iri ise na asatọ. Ha kwuru, sị: “Anyị gaa ozi ọma, ndị mmadụ na-agbakọ ege anyị ntị. Anyị mụmụọrọ ha ọnụ ọchị, ha amụmụọrọ anyị. Ha na-ebu ụzọ achọ ịmata ihe mere anyị ji bịa, ha matachaa ha agwa anyị zie ha ozi ọma. Anyị zichaa ha, obi atọwa ha ụtọ. Anyị gosi ụfọdụ n’ime ha ihe dị na Baịbụl, ha na-ajụ anyị, sị, ‘M̀ nwere ike idetu ya edetu?’ Ihe ndị anyị na-agụrụ ha na Baịbụl na-atụ ha n’anya. Anyị anọfeela otu afọ ebe a. Ọ na-ewutekwa anyị na anyị abịaghị ngwa ngwa. Anyị na-achọ ebe ndị mmadụ na-anụtụbeghị gbasara Jehova anyị ga-aga zie ozi ọma. Ugbu a anyị achọtala ya.”
Misja Beerens na nwunye ya Kristina bụ ndị ozi ala ọzọ mgbe ha bịara n’Indoneshia n’afọ 2009. Ha nọzi n’ọrụ sekit ugbu a. Ha kwuru, sị: “Ọtụtụ ndị na-egedị anyị ntị n’Agwaetiti Madura, dị́ n’Ebe Ọwụwa Anyanwụ Java, bụ́ ebe e nwere ọtụtụ ndị na-ekpesi Alakụba ike. Ọ na-abụ anyị na-aga ozi ọma, ndị mmadụ akwụsị ụgbọala ha sị anyị nye ha magazin. Ha na-asị: ‘Anyị bụ ndị Alakụba, ma magazin unu na-atọ anyị ụtọ.’ Ha na-ajụkwa anyị ma ànyị nwere ike inye ha nke ha ga-enye ndị enyi ha. Ikwusa ozi ọma ebe a na-atọ ụtọ.”
Ihe A Kụrụ n’Ubi Achaala Maka Owuwe Ihe Ubi
Mgbe Nwanna Frank Rice kwatara na Jakata n’afọ 1931, e nwere ihe dị ka nde mmadụ iri isii bí n’Indoneshia. Ugbu a, ọ fọla obere ka ha ruo narị nde mmadụ abụọ na nde iri isii. Nke a pụtara na Indoneshia bụ mba nke anọ ndị mmadụ kacha biri na ya n’ụwa.
Ndịàmà Jehova e nwere n’Indoneshia ebuokwala ibu. N’afọ 1946, ọ bụ naanị ndị nkwusa iri ka e nwere mgbe a lụchara Agha Ụwa nke Abụọ. Ma taa, ndị nkwusa e nwere akarịala puku iri abụọ na isii. Nke a gosiri na Jehova na-agọzi ozi ọma anyị na-ekwusa. Ebe ọ bụkwa na puku mmadụ iri ise na ise, narị asatọ na iri isii na anọ bịara Ncheta Ọnwụ Jizọs n’afọ 2015, ọ pụtara na ọtụtụ ndị ka ga-abata n’ọgbakọ.
Jizọs gwara ndị na-eso ụzọ ya, sị: “Ee, ihe ubi hiri nne, ma ndị ọrụ dị ole na ole. Ya mere, na-arịọnụ Onye nwe owuwe ihe ubi ahụ ka o ziga ndị ọrụ n’owuwe ihe ubi ya.” (Mat. 9:37, 38) Ndịàmà Jehova nọ n’Indoneshia na-arịọkwa Jehova otu arịrịọ a. Ha kpebisiri ike ịna-enye aka eme ka e doo aha Jehova nsọ n’obodo a bụ́ agwaetiti.—Aịza. 24:15.
Alaka Ụlọ Ọrụ Dị́ ná Nnukwu Ụlọ Elu n’Indoneshia